Cabdullaahi Binu Jaxshi – Wajibad
عبد الله بن جحش‎
Saxaabada Suubanaha Rasuulka
Qof Loogu Yeero Amiiral-Mmu’miniin Kii Ugu Horeeyay:
Saxaabiga aynu hadda qaadanayno sheekadiisa waa saxaabiga ay xiriir qaraabo wadaagaan Rasuulka (scw), wuxuu ka mid ahaa asxaabtii ugu horeeyay ee soo gala diinta Islaamka. Cabdullaahi Binu Jaxsh waxaa dhashay Umaymata Binta Cabdil-mudhalib oo ahayd Rasuulka (scw) eeddadiis.
Dhinaca kale wuxuu Cabdullaahi ahaa Rasuulka (scw) seedigiis, maxaa yeelay wuxuu Rasuulka (scw) qabay Zeynaba Bintu Jaxsh oo ay walaalo ahaayeen Cabdullaahi, marna ahayd hooyadii mu’miniinta. Cabdullaahi Binu Jaxsh wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee loo dhiibo calanka Islaamka, sidoo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee loogu yeero Amiiral-mu’miniin.
Markii uu Rasuulka (scw) u fasaxay asxaabtiisa inay u hijroodaan ama u guuraan magaallada Madiina, iyagoo la cararaya diintooda iyo hagardaamada iyo dhibaatooyinka kaga imaanaysa gaaladii Qureysh, wuxuu Cabdullaahi Binu Jaxsh galay lambarkii labaad saxaabadii hijrootay, oo waxaa fadliga hijrada kaga hormaray oo keliya saxaabiga la yiraahdo Abuu Salama.
In si Alle dartii loogu hijroodo, loogana tago qoyska iyo dalka ayaanan ahayn wax ku cusub Cabdullaahi Binu Jaxsh, maxaa yeelay isaga iyo qaar ka mid ah qaraabadiis ayaa waxay hadda kahor u guureen meesha hadda loo yaqaano geeska Afrika ama Xabasha. Hase ahaatee, hijrada markan waxay ahayd mid ka xeel-dheer kana ballaaran tii hore.
Waxaa Madiina u hijrooday dhammaan waalidka Cabdullaahi wuxuu dhalay oo ka koobnaa rag iyo dumar, waayeel iyo dhalinyaro, wiilal iyo gabdho yaryar., maxaa yeelay guriga Cabdullaahi wuxuu ahaa guri Islaam. Maba aynan ka sii bixin magaallada Makka jeer ay guryahoodii ka muuqdaan murugo iyo tiiraanyo, guryihii camirnaa waxay noqdeen oo guryo cidlo ah oo la moodo inaan la deggin ama lagu caweyn weligeed.
Kama soo wareegin waqtigaas wax yar hijradii Cabdullaahi Binu Jaxsh iyo intii la socotayba ilaa maalintii danbe ay soo baxaan madaxdii Qureysh oo ku gaaf-wareeganaya xaafadaha magaallada Makka, bal si ay u aqoonsadaan ciddii ka qaxday magaallada ee ka mid ah muslimiinta, iyo intii ku hartayba. Waxaana madaxdaas ku jiray Abuu Jahal iyo Cutbata Binu Rabiica. Cutbata ayaa eegay guryihii ay lahaayeen qoyskii reer Jaxsh oo dabeeshii boorka badneyd ay garaacayso albaabadii guryaha, dabadeedna wuxuu yiri:
“Guryihii reer Binii Jaxsh waxay noqdeen guryo cidlo ah oo u oonaysa dadkeedii”.
Abuu Jahal ayaa ku yiri
“Yey ahaayeen kuwaas jeer ay guryahoodii u ooyaan?!”.
Intaa kadib wuxuu Abuu Jahal taabsaday gurigii Cabdullaahi Binu Jaxsh, waxayna guryahaas ahaayeen guryaha magaallada Makka ku yiilay kuwooda ugu quruxda badan, uguna hodontinimo badan, oo waxaa yaalay alaabo fara badan. Abuu Jahal wuxuu gurigii Cabdullaahi ugu isticmaalay sida qofka hantida leh ugu isticmaalo hantidiisa.
”Haddaba, akhristow kaalay aynu si wadajir leh u ogaano waxay tahay imtixaankaas qallafsan ama daran ee la mariyay saxaabiga jaliilka ah ee Cabdullaahi Binu Jaxsh.”
Wuxuu Rasuulka (scw) magacaabay ama xushay siddeed (8) ka mid ah asxaabta, si ay u fuliyaan howlgal milateri kii ugu horeeyay ee la fuliyo islaamka. Siddeedaas qof waxaa ku jiray Cabdullaahi Binu Jaxsh iyo Sacad Binu Abii Waqaas, wuxuuna Rasuulka (scw) yiri:
“waxaan amiir idinkaga dhigayaa kan idinkugu adkeysiga badan gaajada iyo oonka.”
Intaa dabadeedna wuxuu calankoodii u guntay ama u dhiibay Cabdullaahi Binu Jaxsh, waxaana la yiraahdaa wuxuu Cabdullaahi ahaa kii ugu horeeyay ee madax looga dhigo ilaalo ka mid ah muslimiinta. Waxaa kaloo la sheegaa inuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee loo dhiibo calanka islaamka Xamsata Binu Cabdul-Mudhalib, waxaa kaloo la sheegaa kuwo kale.
Rasuulka (scw) wuxuu Cabdullaahi u xaddiday ama u tilmaamay meeshii uu aadi lahaa, wuxuuna u dhiibay dhambaal ama qoraal, isagoo faray inuusan eegin waxa ku qoran ilaa uu ka socdo labo maalmood socdaalkood. Ilaaladii uu hoggaaminayay Cabdullaahi Binu Jaxsh markay socdeen labo maalmood, ayaa wuxuu Cabdullaahi furay waraaqdii, waxaaba ku qoran sidatan: “haddaad eegtid qoraalkaygan soco ilaa aad kaga furatid Nakhla oo u dhaxeysa Dhaa’if iyo Makka, waxaadna is dul-taagtaa wararka qureysh, noolana imow wararkooda..”.
Maba dhammeystirin Cabdullaahi aqriska dhambaalka jeer uu durbadiiba ka yiraahdo “maqlid iyo aqbalid waxaa iska leh Nebigii Alle”, dabadeedna wuxuu asxaabtiisa ku yiri: “ wuxuu Rasuulka (scw) i faray inaan socdo jeer aan ka gaaro Nakhla, si aan u daba galo oo aan ugu keeno Rasuulka (scw) wararka Qureysh, wuxuuna iga reebay inaan qasbo mid ka mid ah idinka si uu ii raaco, qofkii doonaya oo jecel shahaado iyo inuu jidka Alle ku dhinto ha i soo raaco, qofkaan doonaynin ha iska noqdo isagoo aan la canaanan”. Asxaabtii ayaa waxay hal mar yiraahdeen “maqalnay oo aqbalnay Rasuulkii Alle, waan kuu raacaynaa meeshii uu ku faray Nebigii Alle”.
Markay arrinku halkaas mareyso, ayaa asxaabtii waxay bilaabeen inay tashadaan, maalintaasna waxay ku beegnayd maalinta ugu danbeysa billaha xurmada leh, waxayna billahaas xurmada leh kala yihiin Dul-qicdah, Dulxijjah iyo Muxarram oo wada xiriira, iyo bisha Rajab. Waa billooyin ay carabta weligood xurmeyn jireen, oo waa xaaraan in dhiig la daadiyo ama in dagaal la qaado billahaas dhexdooda.
Waxay yiraahdeen, haddii aan la dagaalano waxaan la dagaalanay billihii xurmada lahaa, waxaana ka dhalanaya taas in lagu tagri falo bishan iyo in lagu talo galo guud ahaan carada carabta. Haddii aan u kaadino ilaa ay ka tagto maalinta waxay galayaan dhulkii Xaramka, oo markaas way naga badbaadayaan.
Markay u soo galeen Rasuulka (scw), uuna ogaaday falkii ay sameeyeen aad iyo aad ayuu uga xumaaday, wuxuuna si ba’an u dhaliilay falkii ay sameeyeen, isagoo la hadlayana wuxuu ku yiri: “wallaahi ayaan ku dhaartaye idinma farin dagaal, waxaan idin faray oo keliya inaad is-dul-taagtaan wararka qureysh, iyo inaad la socotaan dhaqdhaqaaqooda..”.
Labadii nin ee la soo qafaashay arrinkooda dib ayuu u dhigay Rasuulka (scw), sidoo kalena ma eegin hantidii la soo qafaashay oo waxna kama uusan qaadan. Dhinaca kale, Cabdullaahi Binu Jaxsh iyo asxaabtii kale ayaa si daran uga qoomameeyay falkoodii ay geysteen, waxayna si dhab ahaan u yaqiinsadeen inay halaagsameen, khilaafka ay khilaafeen amarkii Rasuulka (scw) awgeed.
Waxaa dhibaatadoodii dhibaato kale ugu siyaadiyay inay walaalahoodii muslimiinta ay ku badiyaan canaan fara badan, iyo iyagoo markasta ay xaggooda ka weji dadbaan., iyagoo ku oronaya: “waxay khilaafeen amarkii Rasuulka (scw)”.
Waxaa sidoo kale dhibaatadoodii dhibaato kale ugu siyaadisay markay ogaadeen inay qureysh ka heshay dhacdadan mar-marsiiyo ay ku ceebeeyaan Rasuulka (scw) iyagoo qabiilooyinka kale ku oronaya “Muxammad wuxuu banneystay bishii Xurmada badnayd, wuxuu bishii xurmada badneyd daadiyay dhiig, hantidiina wuu qaatay, raggiina wuu qafaashay”.
Waxaa Nebiga (scw) lagu soo dejiyay oraahdii Eebbe (sw) ku lahaa
”Waxay ku weydiinayaan dagaalka bisha xurmaysan, waxaad tiraahdaa dagaalka dhexdiisa waa weyn yahay, xannibid iyo is hortaag jidka Alle ah iyo in Alle lagu kufriyo iyo masjidka xurmeysan iyo ka bixinta ehelkiisa yaase kaga weyn Eebbe agtiis, gaaleynta dadka ayaa ka weyn dilka..”.
Markay soo degeen aayadahan sharafta badan waxaa faraxday oo il-qabowsatay naftii Rasuulka (scw), wuxuu qaatay safarkii oo u qaybiyay muslimiinta, wuxuuna furasho ka qaatay labadii maxbuus, wuxuuna ka raalli noqday falkii ay sameeyeen
Cabdullaahi Binu Jaxsh iyo asxaabtiis, maxaa yeelay waxay ahayd duulimaadkooda mid dhacdo weyn ku ah nolosha muslimiinta, qaniimada laga qabsaday dhacdadaas waxay ahayd qaniimadii ugu horeysay ee la qabsado islaamka, leyntii duulimaadkaasna wuxuu ahaa gaalkii ugu horeeyay ee lagu daadiyo dhiigiisa islaamka, maxaabiistii la qabsadayna waxay ahaayeen maxaabiistii ugu horeeyay ee muslimiinta u soo gacan gala, calankii duulimaadkaas lagu guntayna wuxuu ahaa calankii ugu horeeyay ee uu Rasuulka (scw) u dhiibo koox ka mid ah muslimiinta, amiirkeedana wuxuu ahaa amiirkii ugu horeeyay ee loogu yeero amiiril-mu’miniin, wuxuuna ahaa Cabdullaahi Binu Jaxsh.
Maalintii dagaalka Uxud waxaan la kulmay Cabdullaahi Binu Jaxsh, wuxuu yiri: “maad Alle baridid?”. Waxaan ku iri haa, waxaana labadeenii isula baxnay dhinac, waxaana baryay Eebbe (sw) annigoo leh: “Rabbiyow haddaan la kulmo cadowga waxaad igu soo aaddisaa nin dagaalyahan ah, caradiisa ay aad u daran tahay, aan la dagaalamo, isna ila dagaalamo, dabadeedna waxaad igu arsuqdaa inaan ka guuleysto jeer aan ka dilo, hubkiisana aan ka qaato.
Cabdullaahi Binu Jaxsh ducadeyda ayuu aamiin u yiri, dabadeedna waxaa duceystay Cabdullaahi Binu Jaxsh, wuxuuna yiri “Ilaahayow waxaad igu soo aaddisaa nin caradiisu ay daran tahay, ahna dagaalyahan, adiga dartaa aan ula dagaalamo, isna ila dagaalama, dabadeedna i qabta oo iga adkaada, sanka iyo labada dhegoodna iga gooya, oo markaan berito (maalinta qiyaamo) kula kulmo aad tiraahdo maxaa loo gooyay sankaaga iyo labadaada dhegood, oo aan iraahdo adiga iyo Rasuulkaaga dartii ayaa la iiga jaray, oo aad tiraahdo run baad sheegtay.
Sacad Binu Abi Waqaas wuxuu yiri: “ducada Cabdullaahi Binu Jaxsh waxay ahayd mid ka kheyr badan ducadeyda, waxaan arkay maalinta gelinkeeda danbe, isagoo Cabdullaahi la dilay, jirkiisana la googooyay. Waxaan arkay sankiisa iyo labadii dhegood oo laga soo laa-laadiyay geed.
Eebbe (sw) wuxuu aqbalay ducadii Cabdullaahi Binu Jaxsh, wuxuuna ku maamuusay shahaado, sidii uu ugu maamuusayba shuhaddada sayidkooda oo ah Xamsata Binu Cabdil-Mudhalib. Rasuulka (scw) wuxuu hal qabri ku wada aasay Cabdullaahi Binu Jaxsh iyo Xamsata Binu Cabdil-Mudhalib, Ilaahay dhammaantood ha u naxariisto, innagana ha ina qaadsiiyo wadiiqadoodii toosneyd, aamiin.
Saxaabada Rasuulka (csw)
دعاؤ الصائم عند فطره